डब्ल्यूएचओले राख्यो कोरोनाका भेरियन्टहरुको नयाँ नाम, नेपालमा फैलिएको भाइरस कुन ? « गोर्खा आवाज
डब्ल्यूएचओले राख्यो कोरोनाका भेरियन्टहरुको नयाँ नाम, नेपालमा फैलिएको भाइरस कुन ?
काठमाडौँ । विभिन्न मुलुकमा कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरियन्टहरु देखिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूृएचओले) ले तिनको नामाकरण गरेको छ । बीबीसीले जनाए अनुसार अबदेखि डब्ल्यूएचओले यूके, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा सबैभन्दा पहिला देखा परेका विभिन्न भेरियन्टलाई ग्रीक वर्णमालाका अक्षरहरूको प्रयोग गरेर नामांकरण गरेको छ ।
अब भेरियन्टका नाम के हुनेछन्?
जहाँ भेरियन्ट पहिले पत्ता लाग्यो त्यही ठाउँबाट चिन्ने गरिएको अहिलेको प्रणालीले स्थानविशेषविरुद्ध विभेदपूर्ण भावना विकसित गराएको भन्दै डब्ल्यूएचओले नयाँ प्रणाली ल्याएको हो। जसअनुसार आइन्दा यूके भेरियन्टलाई अल्फा, दक्षिण अफ्रिकी भेरियन्टलाई बिटा अनि भारतीय भेरियन्टलाई डेल्टा भनिनेछ।
यसै महिनाको सुरुमा भारतीय सरकारले त्यहाँ गत अक्टोबरमा सबैभन्दा पहिले यकिन गरिएको B.1.617.2 भेरियन्टलाई भारतीय भेरियन्ट भनिएकोमा आलोचना गरेको थियो। भारतमै फेला परेको अर्को भेरियन्ट (B.1.617.1) लाई ‘कप्पा’ नाम दिइएको छ । भारतमै फेला परेका(B.1.617.2) र (B.1.617.1) भेरियन्ट नेपालमा पनि पुष्टि भएको छ ।
त्यसैले नेपालमा फेला परेका यी भेरियन्टलाई पनि डेल्टा र कप्पा भन्नुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा‍. सागर राजभण्डारीले बताए । ज्यादै संक्रामक मानिने भारतमा फेला परेको ‘डेल्टा’ भेरियन्ट विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा फैलिएको बताइन्छ ।
भेरियन्ट निगरानी जरुरी
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकी कोभिड-१९ प्राविधिक समूहकी प्रमुख मारिया भन कर्खोभले ट्वीट गर्दै “भेरियन्ट पत्ता लगाएर जानकारी दिएकोमा कुनै पनि देशलाई अप्ठेरोमा पारिनुहुन्न” भनेकी छन्। उनले सङ्क्रमण विस्तार रोक्न भेरियन्टहरूको सक्रियतापूर्वक निगरानी गर्न र वैज्ञानिक डेटा बाँड्न आवश्यक भएको बताइन्।
अब प्रयोग गरिने ग्रीक अक्षरहरूले चासोका साथ हेरिएका तथा चिन्ताका साथ हेरिएका दुवै प्रकारका भेरियन्टलाई जनाउनेछन्। तिनका नामहरूको पूर्ण विवरण डब्ल्यूएचओको वेबसाइटमा राखिएको छ।
यी ग्रीक अक्षरहरूले ती भेरियन्टको पूर्ण वैज्ञानिक नामलाई विस्थापन भने गर्ने छैनन्। कर्खोभका अनुसार यदि २४ भन्दा धेरै भेरियन्ट भेटिएको खण्डमा ग्रीक वर्णमालाका अक्षर सकिनेछ र नयाँ प्रणाली घोषणा गरिनेछ।
सोमवार यूके सरकारलाई सल्लाह दिने समूहका एक वैज्ञानिकले यूके कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमा रहेको भनेका थिए। जसको एक कारण विगतमा भारतीय भेरियन्ट भन्ने गरिएको डेल्टा भेरियन्टको विस्तार रहेको उनले बताए।
डेल्टा भेरियन्ट विगतमा यूके भेरियन्ट भन्ने गरिएको अल्फा भेरियन्टभन्दा चाँडो फैलने बताइन्छ। अल्फाकै कारण जाडोयाममा यूकेमा महामारी निकै फैलिएको थियो। बीबीसीबाट